महिनावारी हुँदा असाध्यै पेट दुख्छ ? उसोभए घिउको यो उपाय अपनाउनुहोस् – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / महिनावारी हुँदा असाध्यै पेट दुख्छ ? उसोभए घिउको यो उपाय अपनाउनुहोस्
महिनावारी हुँदा असाध्यै पेट दुख्छ ? उसोभए घिउको यो उपाय अपनाउनुहोस्
admin February 4, 2022 स्वास्थ्य Leaveacomment 282 Views
काठमाडौँ । आयुर्वेदले आँफैले नैे धेरै कुरा भन्ने गर्दछ र यो कुरामा कुनै पनि शंका छैन । यो त्यस्तो विद्या हो । जसले मानिसलाई धेरै रोग उन्मूलन गर्नमा निकै मद्दत गरेको छ तर आज हामी तपाईलाई यससँग सम्बन्धित एउटा घरेलु उपाय बताउन गइरहेका छौँ जुन आफैंमा रामबाण उपाय मानिन्छ र यसले धेरै समस्यालाई हटाउँछ।
नाभिमा घिउ लगाउँदा यति धेरै फाइदा हुन्छ कि पेटको नाभिमा दुई थोपा घिउ मात्र राखेमा यसले एक–दुई फाइदा मात्र होइन दर्जनौं फाइदा हुन्छ । आउनुहोस् जानौं के हुन् त ती फाइदाहरू।
नाभिमा घिउ लगाउँदा फाइदा हुन्छ
सुत्नुअघि नाभीमा घिउ लगाउँदा त्वचा राम्रो हुन्छ, सुख्खापन हट्छ र कपाललाई पनि फाइदा हुन्छ । यसका कारण कपाल झर्ने समस्या पनि धेरै हदसम्म कम हुन्छ, कपाल सुख्खा हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ ।
नाभिमा घ्यू लगाउनाले घुँडालाई पनि फाइदा हुन्छ । यसो गर्दा घुँडाको जोर्नी दुख्ने समस्या धेरै हदसम्म निको हुन्छ र यसले गर्दा हुने दुखाइबाट राहत पाउन थाल्छ। यति मात्र होइन, यसो गर्दा तपाईको ओठलाई पनि धेरै फाइदा हुन्छ । तपाईको ओठलाई यसले राम्रो बनाउँदछ भने सुख्खापन आफै हट्छ। यसको अर्को फाइदा यो पनि बताइन्छ कि यसले कब्जियतको समस्यामा पनि केही राहत दिन्छ।
यसले महिनावारीमा पनि फाइदा गर्छ । महिनावारीको समयमा महिलालाई धेरै पेट दुख्ने समस्या भएमा यसले कम गर्नमा धेरै मद्दत गर्छ । शरीरमा कम्पन हुने समस्यालाई पनि नियन्त्रण गर्छ । धेरै मानिसहरूको को उमेर बढ्दै गएपछि यस्तो समयमा कम्पन बढ्दै जान्छ, जुन यसको प्रयोगले नियन्त्रणमा आउँछ।
Next अब फागुन १ गते देखि यसरी खुल्दैछन् विद्यालय